Ciidamada asluubta Soomaaliya oo u dabbaal-degay aas-aaskooda. - Wargeyska Faafiye
Ciidamada asluubta Soomaaliya oo u dabbaal-degay aas-aaskooda.
Munaasabad lugu maamuusay 44-guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa maanta lugu qabtay magaalada Muqdisho.
Munaasabadda waxaa ka qeyb-galay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, Xubno ka tirsan goleyaasha baarlamaanka iyo xukuumadda, saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale.
Taliyaha ciidanka asluubta Jeneraal Xuseen Xasan Cismaan oo ka hadlay furitaankii xafladda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda iyo waxqabadka ciidanka, wuxuuna ka codsaday dowladda dhexe ee dalka in la dayactiro xarumaha ciidanka, si uu u guto waajibaadkiisa.
Madaxweynaha dowladda federalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey xiritaankii munaasabadda ayaa tilmaamay baahida loo qabo dardar-galinta howlaha ciidanku u hayo ummadda, wuxuuna xusay inay dowladda ka shaqeyn doonto gudashada waajibka arrintaas uga aaddan.
Saraakiisha, saraakiil-xigeennada, alifleyda, dableyda, xaasaka iyo carruurta ciidanka ayuu madaxweynuhu u diray hambalyo iyo bogaadin ku aaddan maalinta aas-aaska ciidanka asluubta oo ku beegan maanta.
Ciidanka asluubta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa la aas-aasay maanta oo kale sannadkii 1970-kii, waxayna howshiisa ay tahay daryeelka iyo dhaqan-celinta maxaabiista, xannaanaynta agoonta, kobcinta wax soo-saarka beeraha iyo horumarinta dhismaha dalka.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsXuddur oo xasilloon kaddib ka bixitaankii Al-Shabaab.B/weyn: Askar Itoobiyaan oo qarax lagu dilayZenawi: "Kismaayo ayaan qabsanaynaa"Dhacdo Murugo leh : Wiil Dhalinyaro ah oo kunool Magaalada Muqdisho oo iska jaray Xubinta Taranka RagaSacked Soldiers Protest in Front of Mogadishu Presidential Compound.